Tantaran'i Lapam-panjakana Mahazoarivo | www.primature.gov.mg
Ao amin’ny ilany atsimo atsinanan’Antananarivo renivohitr’i Madagasikana no misy an’i Mahazoarivo ary nanomboka tamin’ny taon-jato faha-16 no nisy olona nonina tao, tamin’ny vanim-potoana nanjakan’Andriamanelo (1530 – 1570). Tanimbary no manodidina azy avy ao atsinanana, ny reniranon’Ikopa no mamaritra azy avy ao atsimo ary farihy no avy ao andrefana.
Tamin’ny nanjakan’ ANDRIANAMPOINIMERINA (1787 – 1810)
Tany ho any amin’ny taona 1800, dia nosafidiana ho toerana fialam-boly ho an’ny zanaky ny mpanjaka Andrianampoinimerina i Mahazoarivo. Io zanany io izay nantsoina hoe ILAIDAMA no mpandimby azy teo amin’ny fitondrana. Koa nesorin’ILAIDAMA tsikelikely ny “Tsimilefa” izay mponina tao. « Mahazoa zato, mahazoa arivo » hoy ny teniny izay karazana tso-drano ho an’ireo olona nanorim-ponenana tao ka nanomboka teo no niantsoana ity toerana ity hoe : Mahazoarivo. Teo amin’ny toerana avo tao Mahazoarivo no nanorenana trano roa “tranokotona mitafo herana”.
Tamin’ny nanjakan- RADAMA Voalohany (1810-1828)
Sady toerana fialàna voly no Lapam-panjakana i Mahazoarivo tamin’izany fotoana izany. Nonina tao RADAMA ary matetika no nandray vahiny manan-kaja teto Mahazoarivo. Tamin’ny taona 1816 no nandraisan-dRadama an’i CHARDENOUX izay iraky ny Governoran’ny Nosy Maurice Sir Robert FARQHUAR. Rehefa nody ity iraky ny fitondrana maorisiana ity dia niaraka taminy ny rahalahin’ny mpanjaka dia i RATAFIKA sy RAHOVY mba hianatra hamaky teny sy hianatra hanoratra tany amin’ny Nosy Maurice. Tamin’ny taona 1826 dia rava tanteraka i Mahazoarivo vokatry ny fipoahan’ny vanja ary saika namoy ny ainy tamin’izany ny mpanjaka. Nohavaozina indray ity toerana ity ka nanamorona ilay farihy no nanorenan-dRadama ny toeram-ponenany nahitana efitra telo ary voahodidina trano fonenana madinidinika maro.
Mazoto mikarakara sy mikolokolo vonin-kazo Radama, ka novolena rofia ny moron-drano ary teo am-bavahady nasiany soratra bozaka hoe RR (Radama Rex). Zava-maniry maro nampidirin’ny Eoraopeanina sy zava-maniry teratany, indrindra ireo fihinam-boa ary voninkazo samihafa no novolena teo am-podorana ny Lapa.
Tamin’ny nanjakan- RANAVALONA Voalohany ( 1828 – 1861 )
Noraisin’i RAKOTONDRADAMA (mpandimby an-dRadama) sy ny vadiny RASOHERINA teto Mahazoarivo ny Misionera avy amin’ny LMS Andriamatoa William ELLIS tamin’ny taona 1855.
Tamin’ny nanjakan- RADAMA Faharoa ( 1861 – 1863)
Tamin’ny fitondrany no nananganana trano vato nohodidinin’ny hazo fihinam-boa samihafa toy ny paiso, ny akondro ary voaloboka…. ary tamin’izany trano izany no nandraisan-dRadama Faharoa ny Commandant DUPRE izay tonga nisolo tena an’i Frantsa nandritra ny fametrahana azy ho mpanjaka. Mbola najanona teo ihany ilay toerana tian-dRadama Voalohany teny amoron-drano ary nokajiana fatratra ary lasa toerana fivavahana.
Tamin’ny nanjakan- RANAVALONA Faharoa (1868 – 1883)
Nisy ny fanorenana trano natao tamin’ny biriky sy ny fambolena karazan-kazo samihafa nohafarana manokana avy any Eropa toy ny « pruniers » sy « cognassiers ». Nametrahana voron-drano ( cygnes) koa ny tao amin’ny farihy.
Nanomboka tamin’ny nanjakan-dRanavalona Faharoa no lasa fomba nahazatra ny fanaovana lanonan-dehibe amin’ny taombaovao narahin’ny fiaraha-misakafo an-kalamanjàna sy kilalao samihafa. Noraisina teto Mahazoarivo tamin’ny taona 1881 ny Ambasadaoro frantsay tamin’izany fotoana izany, dia ny komisera MEYER.
Tamin’ny nanjakan- RANAVALONA Fahatelo (1883 – 1897)
Natao toerana fialantsasatry ny Mpanjaka i Mahazoarivo ary teto no nanamarihana ny fetin’ny taombaovao nandritra ny folo taona (3 Janoary 1884-3 Janoary 1894). Ny faha-28n’ny volana jona 1884 no noraisin’ny Praiminisitra RAINILAIARIVONY teto amin’ity toerana ity ny Ambasadaoron’i Grande-Bretagne Andriamatoa Hicks GRAVES. Ary ny Governora frantsay, ny Jeneraly GALLIENI no nanangana ny trano mbola iasan’ny Praiminisitra amin’izao fotoana izao.
Raha toerana nipetrahan’ireo Governora frantsay i Mahazoarivo nandritra ny fanjanahantany, dia lasa toeram-ponenan’ny Filohan’ny Repoblika taorian’ny nahazon’i Madagasikara ny fahaleovantena ary lasa lapan’ny Governemanta taorian’ny fe-potoam-piasana voalohan’ny Praiminisitra RAKOTONIAINA Justin.
Toeram-piasan’ny Praiminisitra i Mahazoarivo ary ao amin’ny « Trano Kintana » no anaovana ny Filankevitry ny Governemanta.
Trano lapam-panjakana Mahazoarivo Trano Kintana